PEREZIDAANT OROMOIYYAA ALEMAYO ATOMSA WARII SUMMI NYACHISA OROMO BULCHUU HIN DANDA’AAN. | Fighting for Freedom and Equality
PEREZIDAANT OROMOIYYAA ALEMAYO ATOMSA WARII SUMMI NYACHISA OROMO BULCHUU HIN DANDA’AAN.
Posted by Gishe Abdi Wako on May 25, 2013
“Qoofa isaa jira Diina marfamee jira, yaaki ini hojeetee lafa kana irrati yoo jiratee Oromoo ta’uu isaati.
Alemayo Atomsa Malamaltuma keessa hin qabu, Lafa Oromiya seeran ala gurguramuu ni morma, Ejjeenoo Dhabba isaa irra mixiqee hin beeku, oduu hin jalatuu, duguu fi xuxuu fi nama jala shubsuu hin beekuu” Misenssa H/R TPLF
Obbo Alemayo Atomsa Summii Nyachifamee erga dhokfamee j’aa 3 darbee jira, Hojeetan bakka ini jiruu hin beeku, Hiryoon isaa biyya inni jiruu hin beekan, Mana isaa deemuun dorkadha, Bilbili isaaa kan mana fi kan harka hundi cufadha. Alemanyoon hiriyoota isaa fakkata hunda kan dhabbe fi diina malamaltumaa waan ta’eef xiyeefanoo kara Afuri iti goodhamee jira, diinooleen isaa hundi ni beekamauu, akka inii du’uu ilee guyya gaafa filatamee sana kasee marii guddatuu deema turee, Atnamtiin ajeefana kan jeedhuu mala dhama turee akka ummaani hin beekneti, gartuu isaa ajeesuuf deeman kun gartuu 4 waraa siyyassa TPLF oganan akka Meles Zenawi, Abootii qabeenya Oromoiya dhunfachuu feedhan, akka Ali Alemudin, Daldaltuu waan hundaa fi seeran ala Azeb Mesfin? Mukthar Kadir, fi Nafxanyoota OPDO keessa caaraa argatani lafa fi nama Oromiyya keessa jiru utuu hin hafiin gurgurata jira wara akka Alemu Simee faati (grtuu malamaltumaan beekaman) waara lafa gurguran jari kun amoo danta isaan egachuuf waan danda’aan fi hin dandeenye hunda goocha jiru.
OPDO yeroo jalqabafi hayyama Melese Zenawi Malee dura ta’aa filatee manati galitee gamachuun raftee, Alemayon qoofa isaa diina kara afuri of Oromiya irra facisuu seene, Diin garuu summi nyachisee bakka of barbaduu, ajeejuu si ajeesusi dalnada’uu hosptala isaati ergee, Maliif Germany, ykn USA deemee hin yalamnee? bakka ini jiru madhokfamee??
Hojeetoon Motummaa Naannoo Oromiyya fi Miseensoon OPDO 3,500,000 gadii qaban gungumuu ala ol fudhani dubachuu maliif caalisan? , TPLF Perzdaantiin Oromiyya Stresse ykn Cinqamuu dhukbsata jeedhan sobuu yaalan gaafa dubiin cimituu amoo Nayata sumayee nyatee jeedha. Alemayon Bonbi ilee utuu iti dhukaftee hin cinqamuu, erga Perezdaantii ta’ee booda nyatii isaa qulquliina dhabuu egalee lataa?? Baratoon Oromoo University Adamaa 1,500 erga Summi Nyatan dhukbsatan booda Baratoon Oromoo Arbaminci University 500 ilee haalaa walfakatan dhukubsachuu nuti himamee, olee bulee Midhan Ijoolee Oromoo Nyatan summin makamuu isaa mirkan’uun namoon hidhama jiru. Gabasii Biyya Ethiopiati Nu darbee akka ibsuti Mootummaan Ijoolee Hiyeessa Univesity kesssati baratuu Summii Nyachisuu Morkata isaa Perzedaanti Oromiyya Summi hin nyachifnee yoo jeedhe waan nama ajaibuu miti jeedhee jira. Kan nama Ajaibuu garuu Miseensoon OPDO 3,500,000 ergaa Oganan isaa Summi nyatuu maltuu ta’ee jeedhani gaafachuu mana caalisuun isaa nama salfachisaa. Makmassa Namoota Adammo adeeman 3 ta’aan utuu cisaan warabeesi isaa giduu jiru nyachuu egalan jarii lama maltuu waa boocaa jira jeenan hin dubatiina Warabeessatuu na nyacha jira jeedhe jeedhamaa. OPDO K/H/kasse hanga miseensa gooda jiruuti mirga ummataa isaaf falmachuu miti mirga miseensa isaa ykn Ogana isaaf ilee falmachuu dadhabuun caalaa nama gadisisa. OPDO wadala Haree kan hadha mana isaa Warabessa irra hin olchinee ta’uu ishee Oromoo erga mirkanfatee turee jira.
Gabasi Biyya nu ga’ee kun Mootummaa Nannoo Oromiyya diiguuf ykn laafsan samachuuf warri wawatan Gartuuu Melese Zenawi (TPLF), garuu Abba qabeenya Alamudiin kan halkan guyya badii Oromiyya yaadu, Garuu Mafiya Azeb Mesfiin fi Gartuu waldal Malamaltoota ykn Kiray Sabsabi, kan Alemu Simeen Oganamuu fi Azeb Mesfin waliiti dhufeenyan hojeetuu.
Oduun Ethiopia kun Mootumman Ethiopia Namoota Biyya ala jiran kara danda’amee hunda baleesuf murteefatee namoon heedun akka jira fi namoon Maqa Diplomasiin hojiin dirqama kana fudhatani soocha’aa jirachuu isaan ibsee jira. Oromoo malaqa bitaman tokko tokko dirqama Embassy Wayyanee fudhatan waan jiranf Oromoo fi eguu fi wal eguu akka qabuu dhaman jiru.
Diinii Oromoo fi Oromiyaa TPLF Tigray dhuftee caalaa 1. biyaa Oromiyaa keessati dhalatee kan gudatee ilaman Habasha (ijoolee Tigre fi Amharati) 2. Oromoon ilamaa Habasha kan bakeedha fudhee gudifatee fi makoo Oromoo kan Habasha irra dalchee diini keenya guddan isaan kana. Erga bara 2002 Nekemteeti walga’ii goodhameen OPFOn Heera iiti bulmata ishee diigun Habasha Oromiyya kesssati dhalatee afaan beeku OPDO ta’uu akka danda’uu Melese Zenawi isaa ajeejee booda Kore hoji rawwachiftuu fi koree giduugalessaa OPDO harki 70-90 ilman habashan qabaman Welegati dhalanee kan ofiin jeedha ijoolee habasha warii akka Zelelem Jamanye, Salamoon Abebe, Damsee shitoo, Zwuduu Mamoo, Iluu abbabor keessa Danyachoo shifraw, Teferi Tacanee, Alemu caanyalee, Aster Mamo, Jimmaa irra Muktar Kadir (V.P) Yem (Janjaro), Nega Abba Meca Yem (Janjaro) Ali Siraji, Ali Usuman (gurage), Godiin a Arsi kessa harki caalan kan ta’aan Alemuu Simee, Warqine gabayoo, Sisayii Negash, Adanechi Abebe, Dr. Meshasha shawaraga, Dr. Tibabuu Alemayo, Habtamuu sisay, Tesfayee Abebe, Damalash G/mikaeal, G/Mikael reba, Takalinyi, G/mariyam, Ali Abdo, Simanyi Hube, Tadasee Bahiru, Brihanu Tsgayee, Isheetu Dasee fi kan biroon Namota Oromoo ta’aan tokko tokko gandan of dukka hirisun hoji samuuf samsisuu Oromiyaa irrati dalaga turan. Gartuun kun wara Oromiya keessati dhalatani maqa Oromiyan jiracha Oromiyaa warana jiran, Miseensoon OPDO atataman hirba ka’aan diina isaan keessati goobee jiru kan of irra rukutuu qabuu, gara lafeetiin obboleessaf deesii jeedha oromoon Obsii isiin haga’uu kana caala salphina, gargarasa Tigree fi Amhara malee Oromiyaa bulchuu ni dandeenya jeetan falmachuu qabduu, diina malamaltumman laqatee kana of irra kassuu yoo hin dandeenye ummataa Oromoon mali jeetuu? diini Alemayoo hara summii nyachisee bori siin nyachisaa beeki??
Kun kana qofaa miti yerro ama kana amoo samicha adda fi Oromoo gadii qabu, siyassa kessa ala qabuu irra darban Oromummaa baleesuiu irrati dulaa jiru. Siyyasi Oromiya maqa OPDOn harka ijoolee Habasha jala jira, ijoolee Oromoo OPDO keessa jira kan hunda utuu beekan egeree Oromoof qabsa’uu dhisaan diina jala jiratuu. Wari Oromoo qulqulu ta’aan amoo jara kana sodacha jiru, maliif yoo jeetan warii Oromoo qulquluun wayee Oromiyaa yoo falmachuu egalan saganta ABO gegesituu jeedhaman ganamua sana qoratamuu hoji irra ariatamuu warii kun amoo waan iti himataman Malamaltumadha malee ABO keessa hin qaban. Biyya Ethiopiati amoo dhabba mormitoota hin degeriinmalee malamaltumman hayamamadha kan dhorkamuu nama TPLF mormuu qoofaf, Malamatumman kun Ajeeja Azeb Mesfin Hadha mana Melese Zenawiin waan raawwatuu nami ishee waliin hojeetuu Melemaltumati hin himatamuu raggan tokko Alemu Simeeti namii kun Oromiyaa gutuuman gutuuti nama gurguratee garuu caara barumsaa jeedhamee chaina tii ergamee,. Alemayoo Atomsa amoo akkan malamaltumaa akka in hin rukuneeti summi nyachisan biyya bassan. Miseensoon OPDO Oromoo ta’aan kana caalsuuni saan isaanuma tufachisaa boorifu. TPLF Mekkoon Fixee Miseensa OPDO dura duban konkolata iti ofan irra bassan ajeesan OPDOn ni calisan, Alemayo nama jeedhama itigafatama Malaqa fi dinagdee Oromiyaa Masasara Perzdaanti Ethiopia keessati rassan rukutan ajeesan of Ajeese jeedhan, Takilee Waqiwaya acucaa yerro dheera booda summiin akka dhabamuu goodhamee, Perzdaanti Bank federala mana isaa keessati erga ajeesan booda of ajjesse jeedha, lubun obbo Negasa Tumsa fi abba qabeenya DH Gadaa kan badee ilee gartuu Oromiyya samaa fi samsisaa jiru kana ta’uu hin beekuu qabu. Gartuu Abba Qabenya Amhare Aragawi TPLF CC fi Abba Reporter Gazeexa Guyya safa reeban utuu hin hidhamin USA galan Alemayo Atomsa Summi hin nyachisa jeechuun hin danda’amuu, shakiin biyya kessa nu ergam fula arfanuu qoratamuu qaba. Mootummaan TPLF harki isaa kana keessa hin jiruu yoo ta’ee garuu kana dafee qooratee wara yaaka kana dubaa jiru ifaa basuu qaba. kun ta’uu banan mootumichatuu kesssa jira.
Rakko Oromiyaa kessati kan hameessan fi diina Oromoo ta’aan wari biroon waraa Oromoon gudifachan ilman diina fudhee gudisee fi ijoolee hidha Habasha irra dhalatan rakko enyuumaan rakkata jira Makkoo wari ta’aan biyya keessa fi biya ala dabalatee diina jala hirirun yakka hojeecha jiru. Oromoon yoo bilisomee bakka hin arganuu jeechuun mootummaa Tigre tumsa fi gargara jiru, Icitii Oromoo waan xiino beekan qabatan soba harka 200% iti dabaluun Oromoo qulquluu warii TPLF ti soban saxila jiru isaan kana. ijoolee gudifna (amachisa) fi Makoon Habasha biyya alati ilee kara tokko maqa Oromoo Embassy Ethiopia jala deemuun Tigref tumsa lachuun Oromoo irrati yaaka dalaga jiru. Kara birra amoo maqa Oromootiin daldaluun dhabbilee Habasha waliin tumsa ummachaa jiru, Oromoo kana calisee ilaalun diini isaa borii hubachuu dhabudha. Oromoo Habasha waliin yoomi ilee firee ta’ee hin beekuu utuu. Ta’uus hin danda’uu, kanaafi OPDO Habasha jala jirtuu ilee namoota Oromummaa isaati amana ajeesuu, hidhuu, dararauu, biyya ari’uu, hoji dhorkachuu, barumsaa dorkachuu, dhukuba fi qoonqoon akka dhuman goochuu irra darban bararoota Oromoo fi Perezdaati Oromiyaa dabalatee Summiin ajeesuuf yaalun ijaan arginee jira. Embassy Ethiopia biya ala jiru gantoota Oromoo tokko tokko, Habashaoota Oromiyaa keessati gudatan fi ijoolee makko oftii qabuun qabsa’oota Oromoo Summin baleesuuf akka oli gadii kacha jira, mootummtaa ala dabalatee qabatamun ragga argatanin Embassy Ethiopia fi Ergamtoota maqa Oromoon daldaltuu hunda hordofa jiru. Kun kana argisisuu Mootumman TPLF cinqamuu irra kan ka’ee waan goodhu walalee haafa qabata jira. Kanumman wal qabatee Malaqa Ethiopia biyya alati deema jiru Motummoon hundi akka hordoofan waan goodhamee Oganooni TPLF hundi cinqii gudaa seenan jiru. Qabsoo egalee injiifannoon xumuruff Oromoo bakka hundati hasochoonu jeena.
← Oromumma wojjin dhalanee kessati ofii barree . rabbii nuf kenne, dini nura mulquf yomu nuti galte tarree
Obituary: Dr Sheik Mohammed Rashad Kabir-Abdullee →
2 comments on “PEREZIDAANT OROMOIYYAA ALEMAYO ATOMSA WARII SUMMI NYACHISA OROMO BULCHUU HIN DANDA’AAN.”
Anonymous on July 12, 2014 at 4:16 am said:
Nama nyatut nukesa jira Cara akesan oso aksnt falmane jabdha balee robera
Gishe Abdi Wako on July 14, 2014 at 10:10 pm said:
heduu galatomi yadaa kef,ni turti malee ni urtii